Home Wararka Gudaha Ergayga gaarka ah ee arrimaha bini’aadannimada iyo gargaarka oo kulan la qaatay...
Ergayga gaarka ah ee arrimaha bini’aadannimada iyo gargaarka oo kulan la qaatay wasiirada gargaarka iyo maamul goboleedyada.
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan arrimaha Gurmadka Abaaraha Md Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa kulan la yeeshay Wasiirrada Gargaarka ee Dowlad Gobolleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Kulankan ayaa u jeedkiisu ahaa sidii looga wada-tashan lahaa wajihidda xaaladda abaaraha ee ka jirta dhammaan gobollada dalka iyo u gurmadka dadka sida daran abaaruhu u saameeyeen, kuwaas oo u baahan gargaar bini’aadanimo oo degdeg ah.
Ergeyga ayaa sidoo kale warbixino ku saabsan xaaladda abaareed ee ka jirta Dowlad Goboleedyada ay kala matalayeen ka dhageystay Wasiirrada, waxaana si weyn looga dooday fursadaha jira iyo caqabadaha ood-qaadka u baahan.
Ugu danbeyn, Wasiirrada Gargaarka ee Dowlad Goboleedyada, waxa ay ballan qaadeen in ay si wadajir ah u dardar geliyaan una fududeeyaan howlaha gurmadka Abaaraha iyo in ay si dhow ula shaqeyn doonaan Ergeyga.
Previous articleFahad Yaasiin oo cadeeyay in Dilka Ikraan ay ka dambeeyaan Rooble, Mahad Salaad iyo Al cadaala. Sidee u aragtaa?
Next articleAhmed Madoobe Somalia kansar ayuu ku yahay waa farriin ka timid Fahad Yasiin
Ciidanka dowladda oo sheegay in howlgal qorsheysan ay ku dileen Sarkaal...
Wararkii ugu dambeeyay Xil. Kulane Jiis oo Xasan Sheekh iyo Mahad...
Akhriso:- Toddoba qof oo ajnabi ah oo ka tirsan Daacishta Somalia...